WC | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ary aiza no hanamboarana toeram-pivoahana ao amin'ny firenena
Ny fialan-tsasatra tsara indrindra avy amin'ny rivotra maloto, mazava ho azy, ao amin'ny firenena. Na izany aza, tsy misy zavatra azony atao any ambanivohitra. Ny filàn'ny toeram-pivoahana dia manosika anao hieritreritra ny fisafidianana ny karazana sy toerana ho an'ny fanorenana. Toeram-pivoahana ao amin'ny firenena, ny fomba hisafidianana toerana iray hanamboarana Alohan'ny hananganana trano fidiovana dacha amin'ny tananao, tokony hanapa-kevitra amin'ny toerana misy azy ianao.
Fonds pour cesspools
Olona maro no miatrika ny olana amin'ny fanadiovana rano fisotro madio any amin'ny faritra ambanivohitra. Raha tsy misy rafitra fantsom-pitaterana afovoan-tanàna ao an-tanàna, dia tsy maintsy manamboatra ny anao manokana ianao: mametraka bisy mangina na manodina lavaka. Na ahoana na ahoana, ny karazana sahona rehetra ilaina amin'ny fanadiovana tsy tapaka. Hiresaka momba ny fomba sy ny teknikam-panadiovana ny cesspool ity lahatsoratra ity.
Toeram-pisakafoanana maivana ho an'ny fanomezana, ny foto-kevitry ny asa, ny tanana
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny olona sasany tsy tia ny fitsaharana eto amin'ny firenena dia ny tsy fahampian'ny fananana. Toeram-pitarihana lehibe ny fitsangatsanganana an-trano fitsaharana. Misy antony maromaro mahatonga ny fanorenana trano fidiovana "toy ny ao an-trano" dia tsy azo atao - ny tsy fahafahana mampifandray amin'ny orinasa fitsaboana noho ny tsy fahampian-dry zareo na ny saran-dalan'ny rafitra mitoka-monina mahaleo tena.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ WC